တောင်းရမ်း စားသောက်နေရသော မြန်မာကျောင်းဆရာအိုများ၏ လူမှုဒုက္ခများ(မောက္ခ ပြည်တွင်းပညာရေးသတင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » တောင်းရမ်း စားသောက်နေရသော မြန်မာကျောင်းဆရာအိုများ၏ လူမှုဒုက္ခများ(မောက္ခ ပြည်တွင်းပညာရေးသတင်း)
တောင်းရမ်း စားသောက်နေရသော မြန်မာကျောင်းဆရာအိုများ၏ လူမှုဒုက္ခများ(မောက္ခ ပြည်တွင်းပညာရေးသတင်း)
Posted by ကြယ်လေး on Dec 18, 2010 in How To.., Myanma News | 21 comments
လူမှုဒုက္ခများ ပြည်တွင်းပညာရေးသတင်း မြန်မာကျောင်းဆရာ
သြော်ကြားရတာ တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါလား၊ နာ (၃) နာတောင်မကတော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်။
အစိုးရ၀န်ထမ်းဘ၀ကလည်း အပြင်စီးပွားရေးတွဲ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ရေရှည်ကြရင် အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာ တော်တော်များကတော့သိနေ ကြပါပြီ။
၀န်ထမ်းလောကမှာ ဂွင်ကောင်းပြီး အပိုဝင်ငွေလျှံနေအောင်ရတဲ့ အနေအထားဆိုရင်တော့ ပင်စင်ယူပြီးရင် ယပ်ခပ်နေ ရုံပါပဲ။ အပြင်ဝင်ငွေ (corrupt/side-income) မရ၊ မရှာ နိုင်ဘဲနဲ့ ပင်စင်သွား၊ ထောက်ပံ့တဲ့သားသမီးမရှိတဲ့ ဘ၀ဆိုရင်တော့ ၀န်ထမ်းလောက ကတော့ စိတ်ကုန်စရာကြီးပါ။
တို့နိုင်ငံကလည်း corruption index မှာ ဆိုမာလီယာနိုင်ငံသာသာ ရှိတဲ့ အနေအထား (ဆိုမာလီယာ-အောက်ဆုံး) ဆိုတော့ ၀န်ထမ်းအများစုရဲ့ ၀င်ငွေက ဘယ်ကနေလာနေသလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ငွေတန်ဘိုးဖောင်းပွမှု့နဲ့အတူကျဆင်းသွားတဲ့ ပုံမှန်ဝင်ငွေစား ပင်စင်နာ များရဲ့ အနေအထားကတော့ ……….
အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရ ရင်တော့ တိုးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်မှန်မှန်အလုပ်ပေးနေတဲ့ အင်ဂျင်တစ်လုံးနဲ့တူပါတယ်။ အင်ဂျင်မှန်မှန် အလုပ်လုပ်ဘို့ရာက အစိတ်အပိုင်းတွေက (စနစ် အဆင့်ဆင့်) အချက်ကျကျ အလုပ်လုပ်နေဘို့ လိုပါတယ်။ တစ်နေရာဖောက်လို့ကတော့ အားလုံး ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက် ပေါ့။ နေရာတော်တော်များ ဖောက်လို့ကတော့…….
လွတ်လပ်ရေး ရခါစက ရှိခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေး နဲ့အတူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ အခုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခြေအနေမှာ ရှိနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေအနေကိုယှဥိကြည့်လို့ ၇ပါတယ်။
အရင်ဝန်ထမ်းတွေက ပုံမှန် အလုပ်လုပ်ပြီး အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်။ ပင်စင်ယူရင်တောင်မှ အဆင်ပြေနေတုံးဆိုတဲ့ သဘောပါ။
အခုဝန်ထမ်းတွေလဲ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအဆင်ပြေကြသလဲ ဆိုတာတော့ အားလုံးသိမှာပါ။
အဆင်မပြေကြတာတွေလဲ အပုံအပင်ပါ။ အဆင်မပြေပဲ ဒီလိုနဲ့စခန်းသွားရင်း နဲ့ ပင်စင်ယူကြပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်စာပိုဒ်တွေ ထဲက ဆရာတွေလိုဖြစ်ကြရတာ မဟုတ်ဖူးလားခင်ဗျာ။
လက်ရှိစာသင်နေကြတဲ့ ကျောင်းဆရာ တွေလည်း အဆင်ပြေတဲ့သူကနဲနဲပါ တောကြိုခြုံကြားမှာ မြွေမကြောက် ကင်းမကြောက် သွားလာနေကြရတာ .. တွေကော သင်ရတဲ့စာသင်ခန်းက နွားတင်ကုပ်သာသာ မိုးရွာရင်အစို လေလာတော့ စာအုပ်တွေကိုခဲလုံးလေးတွေနဲ့လိုက်ဖိ ကျောင်းသားတွေမလာတော့လိုက်ခေါ် ဒီအလုပ်မလုပ်ပဲ ဒီအပြင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ အရင်းအနှီးကမရှိ တော်တော်ဆိုးနေတဲ့ လောကလေး တစ်ခုပါ ။ အိမ်ကစီးပွားရေးတောင့်ထားနိုင်လို့ မြို့ပေါ်ရအောင်ပေးကမ်းနိုင်ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ နို့မိုဆိုလို့ကတော့ တွေ့တဲ့ကား လမ်းကြုံလိုက် ဆရာမလေးတွေ စာနာတတ်သူနဲ့တွေ့ရင်တော်သေး ပြောရရင်မဆုံးနိုင်တဲ့ 2001 ညလက်တွေ့ပုံပြင်ဖြစ်ကုန်တော့မယ်
အဖေနဲ့ နယ်ဘက်ကို တခါတလေ ကားနဲ့ သွားရင် လမ်းကြုံ လိုက်ဖို့ တားတဲ့ ဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ကားဆံ့သလောက် တင်ခေါ်သွားတာဘဲ။ အဲဒီ တုန်းကတော့ ကူညီတာ မြင်တာကို ဘယ်လိုမှ ခံစားချက်မရှိပေမဲ့.. အခု အဘနီ ရေးတဲ့ စာမြင်တော့.. သူတို့တွေ အများကြီး ကြိုးစားနေတဲ့ လူတွေ ဖြစ်ပြီး ပင်ပန်းခက်ခဲနေကြပါလားလို့.. တွေးမိပြန်တယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်း ဘ၀ ဂွင်ကောင်းမှ အဆင်ပြေတာနော်.. သိပ်တော့ မလွယ်ဘူး။ ပင်စင်စားတွေ တကယ် ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ လူတွေအတွက် ဖောင်ဒေးရှင်းလေး လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်နော်..
ပိစိကွေး တို့ဘိုးဘိုးက ကျောင်းဆရာပင်စင်စားပါ……. နဂိုကတည်းက ပိုက်ဆံရှိလို့သာပေါ့ မရှိလို့ကတော့ အခုလောက်ဆိုဒုက္ခရောက်နေလောက်ပြီ……. အခုခောတ်ကပိုက်ဆံရှိတဲ့သူမှ အစိုးရ၀န်ထမ်းလုပ်နိုင်တာပါ…… လေးလေးပေါက် ပြောသလို ပလာစတာရှိမှပေါ့…….မလွယ်ရေးချမလွယ်တဲ့ခောတ်ကြီးပါ……. ပိစိကွေးတို့ကတော့ ပိုက်ပိုက်မရှိတော့ လစာနည်းနည်းနဲ့ ရတဲ့အလုပ်လေးကိုပဲအမိအရဖက်တွယ်ထားရတာပေါ့………..ဘယ်သူအပြစ်မှမဟုတ်ပါ
ဘူး ဒီလိုနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်မိတဲ့ ပိစိကွေးရဲ့အပြစ်ပါ……….
တပ်ရှုပ်ကြီးက တနေ့က မေမြို့စစ်ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ ပြောတာ့ သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလအတွင်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘယ်ကဏ္ဍမှ နောက်ကျမကျန်ခဲ့ဘူးဆိုပဲ။ သူလိမ်တာလား ခင်ဗျားတို့လိမ်တာလား။ သူ့ကိုတော့ သတင်းတွေမှာ ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက် ရဟန်းသံဃာတွေကို လှူဒါန်းပူဇော်တာ ခဏခဏ တွေ့နေရလို့ လိမ်မယ်တော့မထင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းကျန်ရစ်အောင် ပြောထားမယ်…။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အထက်တန်းစားအလွှာ လူတန်းစား၂ရပ်စီ ငွေတွေစီးဆင်းတာများလွန်းတော့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေအလဟသဖြစ်ကုန်တာများတော့တာပေါ့..။ အဲဒီယဉ်ကျေးမှု…စံနစ်ပုံစံကို မပြင်နိုင်သရွေ့ တော့ မြန်မာပြည်တိုးတက်လာဖို့သိပ်မမြင်မိပါဘူး..။ ကျန်တဲ့နင်းပြားလူထုဘ၀တွေလည်း တိုးတက်လာပြီး ကမ္ဘာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ သိပ်မလွယ်ပေဘူး..။
နှစ်တွေ အများးးးးးကြီးလုပ်ကြရဦးမှာ..။ ဂျင်နရေးရှင်း..ဘိုင်..ဂျင်နရေးရှင်း..။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ …အဲဒီ အထက်တန်းလွှာထဲကပဲ..သိတတ်တော်ပြီး..ဦးဆောင်.. ထွက်လုပ်မှ..ရမှာ…။
ကျုပ်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝက ဆရာမတယောက် တွေ့ဘူးတယ်သူနဲ့စာမသင်ဘူးဘူး ဒါပေမဲ့ခင်တယ် တနေ့ ဆရာမငှါားနေတဲ့အိမ်မီးလောင်တော့ ဘာမှမရှီ၇တဲ့အထဲ ပိုဆိုးတာပေါ့ နောက်ပြီး ပင်စင်စား အမေအိုကြီးကို လုပ်ကြွေးနေတာတခါတလေတရာမက ပိုက်ဆံ တောင်တယ်ဗျ အဲဒါသူနဲ့သိသူမှန် သမျှက တော့ ပိုက်ဆံပေးရတယ်ပေါ့ နောက်ပိုင်း တွေရင် ရှောင်နေရတော့တယ် ကိုယ် လဲ ဘယ်အမြဲတမ်း ပေးနှိုင်မလဲဘိန်းရာဇာ တို့၊ဦးပိုင်တို့ မှမဟုတ်တာနော် အခုဆရာမကြီး အသက်ရှင်လျှက်မှရှိပါလေစ….
ဒီအဖြစ်ပျက်သာအမှန်ဆိုရင် တော့ ရင်နာစရာကောင်းတယ်လို့ဘဲပြောရတော့မှာပါ။
အခုခေတ်ကတော့ စာသင်ကျောင်းရော အပြင်မှာရော ပညာရွှေအိုးခေတ်ရောက်နေပါပြီ။
ကျနော်အမြင်ပြောရရင်ဒီဆရာအိုကြီးတွေကို ဒီပြင်လူတွေထက် သူုတို့ သင်ပေးလိုက်တဲ့
ပညာနဲ့လုပ်စားနေတဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ကျုရှင်ဆရာများကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီမယ်ဆိုရင်
ဟုတ်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် အခုအဆင်ပြေတဲ့ ၁၀ယောက်စီက အဆင်မပြေတဲ့တယောက်စီကိုသာပြန်ကြည့်နိုင်မယ်ဆို နဲနဲတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ်
ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းကပင်စင်စားဆရာကြီးဆရာမကြီးများကို နှစ်စဉ်သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တိုင်းတပည့်များကဆရာကတော့ပွဲလုပ်ပေးပါတယ် ငယ်ငယ်ကစာသင်ခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုပြန်တွေ့ရတယ် ငယ်ငယ်ကသူငယ်ချင်းတွေတစ်စုတစ်ဝေးတည်းပြန်တွေ့ရတယ် ရှေ့ဟောင်းနှောင်းဖြစ်အကြောင်းလေးတွေပြောကြနဲ့ကြည်နူးစရာပါ ဆရာတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲတချိန်က စာအတူသင်ခဲ့ကြတဲ့သင်ဖေါ်သင်ဖက်တွေ ခုမှပြန်တွေ့ရတော့နှုတ်ဆက်ကြစကားပြောကြ နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၃၀ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ တခဏတာအချိန်လေးပါဘဲ…
ဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာ … ဆရာ ၊ ဆရာမများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ. ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေထဲက အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ ….
အယ်ဒီတာရှင့် ဒီသတင်းကြားရတာ အတော် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ရတနာပုံ သတင်းစာ အနေနဲ့ ဘယ်လို များ ဦးဆောင် အကူညီ ပေးနိုင်ပါမလဲ။
နိုင်ငံ အပြင် ရောက်နေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အများကြီး မတတ်နိုင်ပေမဲ့ အနည်းနဲ့ အများ အကူညီ ပေးနိုင်ကြ မယ် ထင်ပါတယ်။
မြန်မာသတင်းစာတွေဖတ်၇သလောက် ကျောင်းသားဟောင်းတွေ (တတ်နိုင်ကြသူတွေ) ကဦးဆောင်လုပ်တဲ့ ဆ၇ာကန်တော့ပွဲ နဲံ re-union တွေ မြန်မာပြည်အနှံ့ တောေ၇ာမြို့ပါလုပ်လာကြတာတွေ့၇ပါတယ်…။ ၀န်ထမ်းဘ၀ကနေပင်စင်ယူ၇င်ဘ၀ပျက်ကြတာ၊ အထည်ကြီးပျက်ကြ၇တာ ကျောင်းဆ၇ာတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ၀န်ထမ်းလောကသားအားလုံး (အားလုံး) ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ လူ့ဘ၀လုံခြုံေ၇း (social security) စနစ်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ပေး၇မဲ့အစိုး၇ ၇ယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်တုံးကမှမ၇ှိခဲ့လို့ပါဘဲ။ ဖဲကြိုးဖြတ်တာတို့၊ လိုအပ်သည်များမှာကြားတာတို့၊ စက်ခလုပ်နှိပ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်ဖွင့်တာတို့၊ နိုင်ငံတော်၇ဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ေ၇းကဘက်စုံမှာနောက်ကျကျန်ခဲ့ခြင်းမ၇ှိတော့ဘူးဆိုပြီး အေ၇မ၇အဖတ်မ၇ပြော၇ဟော၇တာတို့၊ စတဲ့အ၇ည်အသွေးလုံးဝမ၇ှိတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ နိုင်ငံထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေက အလုပ်များနေကြ၊ တနေ့တာကုန်လွန်နေကြတော့လဲ…ဒီ social security ကဘယ်လို၇ှိနိုင်တော့မှာလဲ…။ ဒါအစိုး၇ကဖေါ်ဆောင်ပေး၇မဲ့စနစ်ပါ…။ အစိုး၇ကသူလုပ်၇မဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲ၊ လူထုအလုပ်ကိုအတင်းဝင်လုလုပ်တော့ လူထုကလဲ အစိုး၇အပေါ်အယုံအကြည်မဲ့ ပြီး၊ ၇ှိသင့်/ဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်မလာတာပါဘဲ…။ လှူချင်ကြသူတွေပြည်ပမှာ၇ှိပေမဲ့လဲ…ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်သလိုဖြစ်နေမှာပါဘဲ…။ ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်ကိုထူထောင်နိုင်မဲ့မျှော်လင့်ချက်တခုတော့၇ှိပါတယ်…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုပြည်ပါ။
ပင်စင်စား ဆရာ/ဆရာမကြီးတွေ တကယ်သနားဖို့ကောင်းကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခြေခံကျောင်းလေးတွေပါ။
ဆရာ/ဆရာမ များမှာ သူတို့ဘ၀သက်တမ်းတ၀က်နီးပါးမျှမက ဆရာ/ဆရာမ ဘ၀နဲ့အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကျရာနေရာ၊ ဒေသမှာ တပည့်တွေ အများကြီး ကို ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ကြရတာပါ။ အားကြိုးမာန်တက် ပညာတွေသင်ကြားပေးခဲ့ပေမယ့်။ ဆရာ/ဆရာမ များရဲ့နေ၀င်ချိန်ဟာလှပမှု မရှိတာများလှပါတယ်။
အမြတ်ဆုံး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာ အန္တောအန္တငါးပါး ထဲကမှ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို လူတော်တော်များများကဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြပေမယ့်။ မိဘ၊ ဆရာ ကြတော့၊ ကိုယ့်မိဘ၊ ကိုယ့်ဆရာ ကိုယ်မှ မလုပ်ကျွေး မပြုစုရင် ဘယ်သူကလာလုပ်ကျွေးပြုစုမလဲတဲ့။
ကိုယ့်မိဘ၊ ကိုယ့်ဆရာ တွေကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ကိုယ်တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြပါစို့။
အငြိမ်းစား ဆရာ/ဆရာမ များအတွက် လှူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းလေး တခုလောက်ဖြစ်လာခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ရှိလာခဲ့ရင် အကြောင်းကြားပေးကြပါ။
မောက္ခကနေ ဖတ်ရကတည်းက စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ပြဿနာရင်းမြစ်က တော်တော်ကို ကြီးနေပါပြီ။
ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းအတွက် တရားခံကိုလည်းသိနေပြီးသား၊ အပြစ်တင်တာလည်းတင်ပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားဖို့လိုနေပါပြီ။
ဒီကိစ္စကို ဖိုရမ်လေးတစ်ခု လုပ်ရင်ကောင်းမယ်
ဖိုရမ် လုပ်မယ် ဆိုလည်း လုပ်လေ.. ၀ိုင်းတွေးပြီး စဉ်းစားပေးမယ်
အဖေက အခု အသက် ၈၃ နှစ် .. အငြိမ်းစား လက်ထောက်မန်နေဂျာ .. ရာထူးနာမည်က မိုက်တယ် ..
ရတဲ့ ပင်စင်က ၆၇၈ ကျပ် .. နေတာက နယ်မှာ .. ပင်စင်ထုတ် ဘဏ်က ၁၅ မိုင်အကွာမှာ .. ကားနဲ့သွားရင် အသွား ၁၀၀၀ အပြန် ၁၀၀၀၊ တစ်နှစ်စာ လက်မှတ်ထိုးပြီး နှစ်ကုန်မှ ပေါင်းထုတ်ရတယ် .. ဒါတောင် ၈၁၃၆ ကျပ်ကို ကားခ ၂၀၀၀ အကုန်ခံ သွားထုတ်ရတယ် .. မထုတ်ရင် လာထုတ်ဖို့ ၊ နောက်နှစ်အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ရှိကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချက် ထိုးဖို့ မသွားမဖြစ် သွားရတယ် .. မသွားရင် ……
သားသမီးတွေ ကောင်းလို့ စားရေး အဆင်ပြေပေမယ့် ပင်စင် လစာ ဆိုတာကြီးက မစွံပါဘူး
ယူအက်စ်မှာ ..လူမှုဖူလုံရေးပုံစံက..ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်က စလုပ်ခဲ့တာလို့မှတ်ဖူးတယ်..။
ကောင်းမွန်လို့ ..ယူအက်စ်အစိုးရက ၀ယ်လိုက်တာတဲ့..။
မြန်မာတွေလည်း .. ကိုယ်တိုင်လုပ်သင့်ကြပြီ..။
ငယ်တုန်းအလုပ်နိုင်တုန်း.. လစဉ်ဝင်ငွေထဲက ..ရာခိုင်နှုန်းတခုစုထည့် .. ပင်စင်စားချိန် အချိုးကျပြန်ထုတ်တာမျိုးပဲ..။
အစိုးရချည်း အားကိုးနေဖို့ ..မလိုပါဘူး..။